NBUDATA ỤDỊ NSỤGHARỊ NKE PYXELEDIT - MMEMME NYOCHA - 2019
Ihe osise eserese bụ ụzọ dị mfe iji gosipụta foto dịgasị iche iche, ma ọbụna ha nwere ike ịmepụta nnukwu ihe. Edere ya na onye nchịkọta akụkọ na ihe okike na ọkwa pixels. N'isiokwu a, anyị ga-elele otu n'ime ndị editọ kachasị ewu ewu - PyxelEdit.
Ịmepụta akwụkwọ ọhụrụ
N'ebe a, ịkwesịrị ịbanye uru a chọrọ maka obosara na ịdị elu nke kwaaji na pikselụ. O kwere omume kewaa ya n'ámá. Ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya itinye nnukwu akụkụ mgbe ị na-eke ihe, nke mere na ị gaghị arụrịrị ọrụ ruo ogologo oge na mbugharị, ma foto ahụ agaghị egosipụta ya n'ụzọ ziri ezi.
Enweghị ihe ọhụụ na windo a - ọ bụ naanị ịbịaru gburugburu ebe obibi. A na-ekewa ya n'ime ihe mgbagwoju anya, nke a pụrụ ịkọwa ya nke ọma mgbe ọ na-emepụta ọrụ ọhụrụ. Ma ọ bụrụ na ị legide anya, karịsịa na-acha ọcha, ị pụrụ ịhụ obere square, nke bụ pixels. N'okpuru ebe a na-egosiputa ihe ọmụma zuru ezu gbasara ịdị mma, ọnọdụ nke cursor, nha ebe. Enwere ike ịmeghe ọrụ ọrụ iche iche n'otu oge ahụ.
Ụlọ ọrụ a yiri nke ahụ sitere na Adobe Photoshop, mana enwere ọtụtụ ngwaọrụ. A na-emepụta ntanetị na pensụl, na ntanye - iji ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị. Site na-agagharị, a gbanwere ọnọdụ nke dịgasị iche iche na waaaji, ọ bụ pipette na-edozi agba nke ihe ụfọdụ. Magnifier nwere ike ibudata ma ọ bụ wepụ ihe oyiyi. Eraser weghachite agba ọcha nke waaji. Ọ dịghị ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
Site na ndabara pensụl na-adọta otu pikselụ n'ịdị elu ma nwee opacity nke 100%. Onye ọrụ ahụ nwere ike iwelie okpukpu nke pensụl ahụ, mee ka ọ nwekwuo uzo, gbanwee ebe ịbịaru - mgbe ahụ n'ọnọdụ ya, a ga-enwe obe nke anọ pixels. Ịgbasasị pixels na mgbanwe ngbanwe ha - nke a dị mma, dịka ọmụmaatụ, maka onyinyo nke snow.
Site na ndabara, palette nwere 32 agba, ma windo na-agụnye ndebiri nke ndị mmepe kwadebere maka ịmepụta eserese nke otu ụdị na ụdị, dịka e gosipụtara na aha ndebiri.
Ịnwere ike ịgbakwunye otu ihe ọhụrụ na palette n'onwe gị iji ngwá ọrụ pụrụ iche. A na-ahọrọ agba na ndò, dịka na ndị editọ niile. Na nri bụ agba ọhụrụ na agba ochie, ọ dị mma iji tụnyere ọtụtụ ojiji.
Iyi na Nkọwa
Nke ọ bụla nwere ike ịnọ na oyi akwa dị iche iche, nke na-eme ka nhazi nke ụfọdụ akụkụ nke onyinyo ahụ dị mfe. Ị nwere ike ịmepụta ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ọkwa ọhụrụ na mbipụta ha. N'okpuru ebe a bụ nwelite nke gosipụtara foto a. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-arụ ọrụ obere nkọwa yana mpaghara ọrụ na-amụbawanye, a ga-ahụ foto niile na windo a. Nke a na-emetụta akụkụ nke ọ bụla, window nke dị n'okpuru nlele.
Iji aka na-ahọpụta ngwá ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla dị oké njọ, ma jiri nwayọọ nwayọọ kwụsị ịrụ ọrụ. Iji zere nke a, ọtụtụ mmemme enwere setịpụrụ setịpụrụ nke hotkeys, PyxelEdit abụghịkwa otu. A na-ede ihe niile na omume ha na windo dị iche. N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe ha.
Ọdịdị dị mfe ma dị mfe;
Windo windo ngbanwe;
Kwado otutu oru n'otu oge.
A na-ewere PyxelEdit otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịmepụta pixel ndịna-emeputa, ọ gaghị ejupụta ọrụ, mana n'otu oge ahụ, ọ nwere ihe niile ịchọrọ maka ọrụ dị mma. Edere ikpe maka nbudata maka nyochaa tupu ịzụta.
Download nbudata nke PyxelEdit
Mmemme iji mepụta ihe pixel Esi edozi njehie na window.dll na-efu Onye mmepụta 1999 Akara Ngwa Nkọwapụta
PyxelEdit bụ usoro ewu ewu maka ịmepụta pixel eserese. Zuru okè maka ndị novice na ndị ọkachamara ahụmahụ. E nwere usoro setịpụ nke atụmatụ maka ịmepụta eserese.
Udi: Ndi nhazi akwukwo maka Windows
Onye Mmepụta: Daniel Kvarfordt
Akwụ ụgwọ: $ 9